ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ တီမောလက်စ်တေ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Joao Freitas de Camara ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်းသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ တီမောလက်စ်တေ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Joao Freitas de Camara အား ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာ အဆောင်အမှတ် (I-5) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တီမောနိုင်ငံတို့၏ တိုးတက်ကောင်းမွန်သော နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၊ တီမောနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် နိုင်ငံတည်ဆောက်မှု အတွေ့အကြုံများ၊ နှစ်နိုင်ငံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အပြန်အလှန် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများ အသင်းတွင် တီမောနိုင်ငံ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊ တီမောနိုင်ငံ၏ သယံဇာတထုတ်ယူသုံးစွဲရာတွင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အတွေ့အကြုံ ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဘိုဘိုဦး နှင့် လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်